IFomstack: Indawo yeArhente yokuGcina abaQinisekisi beArhente | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 28, 2012 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
Kunzima njenge-arhente ukusebenza ngabathengi kwimiba yobhaliso lwesizinda, imicimbi yeenkonzo zedomain, kunye neminye imiba yeakhawunti. Endaweni yokulinda ngapha nangapha, iintlanganiso kunye nokwabelana ngescreen, sifumana nje zonke iziqinisekiso esizifunayo kubaxumi bethu. Olu hlobo lolwazi alulunganga ukuhlala nje kwi-imeyile okanye kwifayile yokubhaliweyo kwenye indawo-ke siyisebenzisa kakuhle IFomstack endaweni yoko.
Omnye umzekelo kuxa sifuduka kubaxhasi bethu sivela kwenye inkonzo yokubamba iye kwenye. Ukwenza izinto zibe lula, senza into elula ifom yekhadi labo letyala kunye neenkcukacha zobhaliso, emva koko siye kuthenga iakhawunti egameni labo kwaye sibahambise ngaphandle kwengxaki.
IFomstack ibonelela ngeqonga elikhuselekileyo ngokupheleleyo, kwaye lide longeze ukungena okongezelelekileyo ukufikelela kuyo nayiphi na idatha ekhuselekileyo. Oku kuthetha ukuba nokuba umntu ngandlela thile ungena kwifayile yam IFomstack iakhawunti, abanakho ukufikelela kulwazi oluchaziweyo ngaphandle kokwazi iphasiwedi eyongezelelweyo. Oku kusenza ukuba sigcine iziqinisekiso kwindawo ekhuselekileyo, sizisebenzise xa kukho imfuneko, kwaye singazikhathazi ngazo ixesha lonke!
Ukuba ungummeli, nxibelelana nomxhasi wethu wetekhnoloji IFomstack ukuqala iakhawunti yakho. Ukuba usebenza ne-arhente, musa ukuthumela ikhadi lakho letyala okanye iinkcukacha zokungena kubo nge-imeyile, ifeksi, okanye ngefowuni… bafumane bakha ifom yesiqinisekiso kwi-intanethi apho unokubeka khona ulwazi lwakho.
tags: arhenteNkonzoiinkcukacha zabaxhasiukungena kwerejistra yobhalisoukungenaiiarhente zentengisoigama lokugqithapassword